I-Fitbit Charge 2 kunye neFitbit Flex 2, izinto ezimbini ezinxitywayo ngoku ziyafumaneka | Iindaba zeGajethi
I-Fitbit Charge 2 kunye neFitbit Flex 2, izinto ezimbini ezinxitywayo ngoku ziyafumaneka
UJoaquin Garcia | | Izixhobo ezinokunxitywa, elektroniki
Kudala sisiva malunga nokunxitywa kweFitbit ezimbini ixesha elide, izixhobo ezibonakala ngathi ziyakhuphisana neewatchwatches zanamhlanje kunye neebhendi ezinamandla kakhulu. Ngoku ezo zixhobo zeFitbit ziyinyani ezithi inokuthengwa kwiwebhusayithi yeFitbit.
I-Fitbit Charge 2 y Fitbit Flex 2 Zizinto ezintsha ezinxitywayo zeFitbit, izixhobo ezinezixhobo ezinamandla kunye nexabiso eliphantsi. Eyokuqala inenguqulo ekhethekileyo ebiza kancinci kwaye ibe yeyomntu kwangaxeshanye.
Intlawulo yeFitbit 2 inokunxitywa kunye Isikrini se-oled esingu-1,5 intshi. I-Charge 2 ikwanonxibelelwano lweBluetooth olusivumela ukuba sisebenzise iFitbit Charge 2 njenge-smartwatch efumana izaziso kunye nolunye ulwazi oluvela kwiselfowuni. Iya kuba nayo iGPS kunye nokubeka esweni intliziyo yokujonga ukubetha kwentliziyo yethu. Sinokudala nokwenza iiseshoni zokuphefumla. Ixabiso le Intlawulo yeFitbit 2 zii-euro ezili-159,95, ixabiso ekufuneka sidibanise kulo ixabiso lentambo ukuba sifuna ukuyitshintsha. Ixabiso lingangaphezulu ukuba ukhetha uhlobo olukhethekileyo lwesixhobo, kule meko sithetha nge-189,95 euro.
Intlawulo yeFitbit 2 inokuba yenye indlela efanelekileyo kwi-smartwatch
El Fitbit Flex 2 iyanxibeka ngexabiso eliphantsi kodwa nayo ifana kakhulu neqela lomzimba. Kule meko sithetha ngesixhobo esingangenwa ngamanzi, isiqwenga esiphakathi esinezibane ezi-XNUMX ezikhanyisiweyo ezinemibala esetyenziselwa ukwazi izaziso kunye nemisebenzi esebenzayo. Oku I-centerpiece inokutshintshana nayo nayiphi na intambo kunye nezixhobo ezifanelekileyo, kunye neXiaomi Mi Band 2 okwangoku. IFitbit Flex 2 esweni umthambo ukubhukuda esikwenzayo kunye nezinye iintlobo zomthambo esizenzayo, nangona ulwazi lweseshoni luya kwaziwa ngokusetyenziswa kweselfowuni.
I-Fitbit Flex 2 ixabiso ngama-99 euros, Ixabiso elinomdla ukuba sithathela ingqalelo ukuba ukunxiba kuya kuba nokuzimela kweentsuku ezi-5, into ezinikezelwa zizixhobo ezimbalwa okwangoku.
Izixhobo ezitsha zeFitbit zazisele zithembisa xa sasisiva ngazo kwaye ngoku sazi nexabiso, zinomdla ngakumbi. Ubuncinci iFitbit Charge 2 inokuba yindawo enkulu endaweni yabaninzi ujonge i-smartwatch efikelelekayo kodwa ngemisebenzi emikhulu Ingaba ucinga ntoni? Ngaba ucinga ukuba ezi zixhobo zimbini zeFitbit zixabisekile?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo ezinokunxitywa » I-Fitbit Charge 2 kunye neFitbit Flex 2, izinto ezimbini ezinxitywayo ngoku ziyafumaneka
I-Samsung Gear S3 ibonakala ngaphambi kokunikezelwa kwayo
Intsapho yakwaGoogle yeNokia iya kunyamalala kulo nyaka